Umzi-mveliso wethu weBIOTEK anesthesia uyakuba neentsuku ezi-5 zokuphumla ukusukela nge-1 kaMeyi ukuya kwi-5 kaMeyi, ngo-2021, ukubhiyozela iholide yoSuku lwaBasebenzi lwaMazwe ngaMazwe. Funda ngokugqithisileyo »
Intshayelelo I-anesthesia yendawo (i-anesthesia yendawo) yindlela yokuthintela okwethutyana ukuqhuba kwe-nerve kwindawo ethile yomzimba ukuvelisa i-anesthesia, ebizwa ngokuba yi-anesthesia yendawo. Xa kuthelekiswa ne-anesthesia ngokubanzi, ayinampembelelo engqondweni, kwaye inokuba nenqanaba elithile leposi ...Funda ngokugqithisileyo »
Ngokomgangatho kunye nohlobo lwesiphumo se-anesthesia, iindlela zangoku ze-anesthesia zihlelwa ngolu hlobo lulandelayo. (1) I-analgesia ye-acupuncture kunye ne-anesthesia encedisayo yindlela ekhethekileyo ye-anesthesia ephuhliswe ngokwamava e-acupuncture kunye ne-acupoints ...Funda ngokugqithisileyo »
Inkcazo yomatshini wokubulala iintlungu kukwenza umzimba wesigulana okanye inxenye yexeshana ilahlekelwe yimvakalelo yentlungu. Inkcazo epheleleyo kukwenza umzimba wesigulana okanye inxenye yokulahleka okwexeshana kunye nengqondo nangayiphi na indlela, ukwamkela unyango oluqhaqha kakuhle, kunye nokuyeka ...Funda ngokugqithisileyo »